अहिले देश चुनावी माहौलमा होमिएको छ । स्थानीय निर्वाचन नभएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो । यत्तिका वर्षपछि चुनाव हुने भएपछि नेता मख्ख, कार्यकर्ता दङ्ग नहुने कुरै भएन । लुकेका नेता टोलटोलमा पुग्न थाले, कार्यकर्ता पनि आफ्ना नेता आए भनेर मख्ख पर्न थाले अनि त बनिहाल्यो नि चुनावी माहौल । चुकनाव हो चुनावमा जे पनि हुन्छ । हार्नुपर्नेले जित्नसक्छ, जित्नुपर्ने आँकलन गरिएकाले हार्न सक्छ । यसैका लागि त मुलुकमा चुनाव चाहिएको । अहिले चुनाव नचाहने को होला ? सबैलाई चुनाव चाहिएको छ । मधेसीमोर्चालाई पनि चुनाव चाहिएको छ । राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्ने माध्यम भनेको वास्तवमा चुनाव नै हो । यसैले चुनाव कुनै पनि हालतमा भए हुन्थ्यो र आफूले जित्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना दल, दलका नेतामा छ । कार्यकर्ता जो अन्धभक्त कार्यकर्ता छन्, उनीहरु पनि आफूलाई मन परेकाले चुनाव जिते केके न हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् । पाउनु त के छ र ? दुनियालाई थाहा भएकै कुरा हो । चुनावपछि जनताले के पाए अनि के पाएनन् भनेर कसलाई सोध्नुपर्छ र ?
जब चुनाव आउँन थाल्छ । एउटा रमाइलो चाँही मनोरञ्जनप्रेमीलाई हुन्छ । त्यो के भने सभा, भेला हुन्छ । त्यहाँ नाँचगाँन, भोज भतेर हुन्छ, आश्वासन बाँड्ने काम हुन्छ, मिठा मिठा सपना देखाउने काम हुन्छ, कति नेताले चुटकिला,उखान भनेर पनि हसाउँने गर्दछन् । गाउँगाउँमा बसको व्यवस्था गरेर कार्यकर्ता शहरमा वा रमाइलो भेला हुने ठाउँमा झार्छन् । यो वास्तवमा रमाइलो पक्ष हो । अनेकथरी रमाइलो एकै ठाउँमा हेर्न पाएपछि टिकट काटेर फिल्म हेर्न जाँन पनि परेन । मेला, महोेत्सव भन्दा कम हुन्न यस्ता रमाइलो । अनि किन नजाँनु दलको सभामा । त्यस्तै परे दाम पनि पाइन सक्छ । दलका कलाकार जस्ता नेता को को हुन चिन्न पाइन्छ, उनीहरुको अभिनय हेर्न पाइन्छ, परिआए उनीहरुको क्यारिकेचर गर्न पनि सिकिन्छ ।
यो बेला पार्टी परित्याग, प्रवेशले पनि राम्रै चर्चा पाउँछ । अवसरका लागि पार्टी परिवर्तन गर्नुको मज्जा पनि छुट्टै हुुँदो हो । हिजो एउटा पार्टीको कार्यकता आज अर्कैमा प्रवेश गर्यो । परिआए विभिन्न पदमा उम्मेदवारी पनि दियो । अवसरै अवसर आउँने बेला त वास्तवमा चुनाव नै पो रहेछ । यसो नेताको अघिपछि लागेर हिडे सवारीसाधन, पेट्रोलदेखि खर्चपर्च पनि व्यवस्था हुने । चुनावको प्रचारप्रसार छ भन्यो घरबाट निस्कियो, दालभात बाहिरै ठोक्यो, बेरोजगार पनि भइएन, व्यस्त भइयो । केही केहीलाई यस्तो लाग्दो हो, यो चुनाव त वर्षैपिच्छे आए हुन्थ्यो, अवसरै अवसर मिल्छ । चुनावका बेला नेताहरु प्नि विभिन्न पद पाउने लोभमा आफू निकटका नेतासंग राम्रै उठबस गर्न थाल्छन् । अघिपछि चोकचोकमा गाली गर्दै हिडेको नेताको यो बेला गुनगान गाउने काम तिनैबाट हुने गर्दछ । पार्टीमा फरक गुटको भनेर चिनिएका पनि चुनावका बेला एकाएक गुट परिवर्तन गर्न पनि पछि पर्दैनन् नेता । वाह ! कति राम्रो संस्कार देख्न पाइन्छ यो चुनावका बेलामा । वास्तवमा यो चुनाव भनेको अवसरै अवसरको पर्व नै रहेछ ।